Kugadziriswa kwekumanikidza: Kubvumirana kana kusabvumirana? - Law & More B.V.
Kugadziriswa kwekumanikidza: Kubvumirana kana kusabvumirana?
Munhu ane chikwereti asisakwanise kubhadhara zvikwereti zvake zvisati zvaitika ane mashoma sarudzo. Anogona kufaira zvake bankruptcy kana kunyorera kubvumidzwa kune yepamutemo chikwereti kugadzirisa hurongwa. Mukweretesi anogona zvakare kunyorera kubhuroka kwemunhu ane chikwereti. Asati ane chikwereti asati agamuchirwa kuWSNP (Natural Persons Chikwereti Kugadziridza Mutemo), iye anozofanira kupfuura nenzira irikunakidzwa. Mukuita uku, kuyedza kunoitwa kuti usvike kugarisana zvakanaka nevose vane chikwereti. Kana mumwe kana vazhinji vanokwereta vasingabvumirani, mukweretesi anogona kukumbira dare kuti rimanikidze varikuramba kubvuma kugadzirisa.
Iyo yekumanikidzirwa kugadzirisa inodzorwa muchinyorwa 287a Kubhuroka Mutemo. Mukweretesi anofanira kuendesa chikumbiro chekumanikidzirwa kugadziriswa kudare panguva imwecheteyo nechikumbiro chekubvumirwa kuWSNP. Shure kwaizvozvo, vese vanoramba zvikwereti vanoshevedzwa kunzwi. Iwe unogona ipapo kutumira dziviriro yakanyorwa kana iwe unogona kuisa pamberi pekuzvidzivirira kwako panguva yekutongwa. Dare richaongorora kana iwe ungangodaro wakaramba kurongeka murunyararo. Kusawirirana pakati pekufarira kwako kuramba uye zvido zvemunhu ane chikwereti kana vamwe vakweretesi vanokanganiswa nekuramba ikoko zvichatarisirwa. Kana dare richifunga kuti iwe ungadai usina kuramba zvine musoro kubvumirana nehurongwa hwekubhadhara chikwereti, chikumbiro chekumisikidzwa chinobvumidzwa. Iwe uchafanirwa kubvuma kune iyo mari yaunopihwa uyezve uchafanirwa kubvuma chikamu chemubhadharo wechikumbiro chako. Uye zvakare, semunhu anoramba mukweretesi, iwe unozorairwa kuti ubhadhare mari dzekutongwa. Kana chikwereti chakamanikidzwa chikasamanikidzwa, chinozoongororwa kuti ane chikwereti angabvumidzwe here mukugadzirisa chikwereti, chero bedzi ane chikwereti achichengeta chikumbiro.
Iwe unofanirwa kubvumirana semukweretesi here?
Pokutangira ndekwekuti iwe unekodzero yekubhadharwa zvizere kwezvaunoda. Naizvozvo, musimboti, haufanire kubvuma kubhadhara zvishoma kana kurongeka (murunyararo).
Dare rinotora chokwadi chakasiyana nemamiriro ezvinhu mukutarisa chikumbiro. Mutongi anowanzo tarisa zvinotevera zvinhu:
chirevo chakanyatso nyorwa uye zvakavimbika;
chikumbiro chekugadzirisa chikwereti chakaongororwa nebato rakazvimirira uye rezvehunyanzvi (semuenzaniso, bhangi remakanzuru chikwereti);
zvakajekeswa zvakakwana kuti kupihwa ndiko kwakanyanyisa kuti uyo ane chikwereti anofanirwa kutariswa semari anokwanisa kugadzira;
iyo nzira yekubhuroka kana kugadzirisa chikwereti inopa imwe tarisiro kune ane chikwereti;
imwe nzira yekubhuroka kana kugadzirisa chikwereti inopa imwe tarisiro kune anenge akweretesa: zvingangoita sei kuti anoramba mukweretesi agamuchire zvakaenzana kana kupfuura?
zvingangoita kuti kumanikidzwa kubatana mukugadzirisa chikwereti kunokanganisa makwikwi emukweretesi;
pane muenzaniso wezviitiko zvakafanana;
chii chakakomba kufarira kwemukweretesi mukuteerera zvizere;
chikamu chakadii chechikwereti chakatarwa neanoramba mukweretesi;
anoramba mukweretesi achamira ega padivi pevamwe vakweretesi vachibvuma kugadzirisa chikwereti;
kwaimbove nerunyararo kana kumanikidzwa kubhadhara chikwereti chisina kuitwa nemazvo. 
Muenzaniso unopihwa pano kuitira kujekesa kuti mutongi anoongorora sei nyaya dzakadai. Munyaya iri pamberi peDare reKwidza Mhosva muDen Bosch , zvaifungidzirwa kuti chikumbiro chakaitwa neakakwereta kune vaakakweretesa pasi pekugadziriswa murunyararo hachigone kutariswa sekunyanyisa kwaaigona kuzotarisirwa kuve nemari anokwanisa . Izvo zvaive zvakakosha kuti uzive kuti mukweretesi anga achiri mudiki (makore makumi maviri nemashanu) uye, pamwe nekuda kweiyo zera, aive, musimboti, mukana wepamusoro wekuwana mari. Izvo zvaizogona zvakare kupedzisa kuiswa kwebasa munguva pfupi. Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvaitarisirwa kuti uyo ane chikwereti anokwanisa kuwana basa rinobhadharwa. Izvo chaizvo zvinotarisirwa zvevashandi hazvina kuiswa muhurongwa hwekubhadhara chikwereti hwakapihwa. Nekuda kweizvozvo, zvaive zvisingaite kunyatso sarudza kuti ndeipi nzira yekumisikidza chikwereti kumisikidzwa yaizopa maererano nemhedzisiro. Zvakare, chikwereti chemunhu anenge achiramba chikwereti, DUO, chakaverengera chikamu chakakura chechikwereti chose. Dare rekukwiridzira raive nemafungiro ekuti DUO inogona kuramba zvine mutsindo kubvuma kugadzikana.
Uyu muenzaniso ndewekuenzanisira chete. Paive nemimwe mamiriro ezvinhu aibatanidzwa zvakare. Kunyangwe mukweretesi angaramba kubvuma kurunyararo kugadzirisa zvinosiyana kubva pane imwe nyaya kuenda kumatare. Zvinoenderana nemaonero chaiwo uye mamiriro ezvinhu. Uri kutarisana nekumanikidzirwa kugadzirisa? Ndokumbirawo ubate mumwe wemagweta pa Law & More. Vanogona kukuisira dziviriro uye nekukubatsira panguva yekutongwa.
 Dare rekukwidza 's-Hertogenbosch 9 Chikunguru 2020, ECLI: NL: GHSHE: 2020: 2101.
 Dare rekukwidza 's-Hertogenbosch 12 Kubvumbi 2018, ECLI: NL: GHSHE: 2018: 1583.
Next Zvinotarisirwa nemushandirwi nemushandi zvinoenderana neMutemo Wekushanda Wekushanda »
pashure «Tequila Kukakavara